आज मंगलबारको दिन यी कार्य गर्दा निकै अशुभ हुने, के के हुन्? – Suchana Hub
आज मंगलबारको दिन यी कार्य गर्दा निकै अशुभ हुने, के के हुन्?
काठमाण्डौ । भगवान गणेशलाई हिन्दु धर्मावालिमा एक विशेष स्थान र मान्यता दिईएको छ । विशेषत उनलाई मंगलबारको दिन पूजिने भएपनी जुनसुकै कार्यको थालनी गर्नु अगाडी गणेशको पूजा गर्ने गरिन्छ। गणेशको आराधना नगरी कुनै कार्य गर्दा पनि सफल हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ ।
धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरी अनुसार मंगलबारको दिन निम्न लिखित कार्यहरु गर्न मनाही रहेको छ : १. मंगलबारको दिन कपाल, दारी वा नङ नकाट्नुहोस् । २. मंगलबार सकेसम्म घरमा हवन नगर्नुहोस् । ३. मंगलबारको दिन पैसाको लेनदेन नगर्नुहोस् । ४. मंगलबारको दिनमा पशु बलि तथा अन्य पशुको हत्या नगर्नुहोस् ।
Previous जोडले कराउँदा मुख नजिक हातको घेरा किन बनाउने गरिन्छ ?
Next किन गर्छन् मानिसले पशुसँग याैन सम्पर्क ?